Akhriso: Sheeko xigman badan oo kobcin doonta dhiiri gelintaada iyo himilada - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Akhriso: Sheeko xigman badan oo kobcin doonta dhiiri gelintaada iyo himilada
June 26, 2019 5:26 PM - Written by Warbaahinta AlloolNews
MAROODIGA OO KALE NOQO!
Maroodiga midkiisa labka ah (Ninka), Soomaalidu waxay utaqaannaa “Arbe”, midkiisa dheddigga ahna waxaa la yiraahdaa “Qalanjo”.
Waxaa jirtay qiso la ayaab leh oo ku saabsan Qalanjo iyo Eey dheddig ah (Bitch). Labadooduba isku mar ayay uur qaadeen. Si is-daba joog ah ayaa ay Eydu ilmo udhalaysay, iyadoo wali qalanjadii ay xaamilo tahay, wax carruur ahna aysan dhalin. Eyda ilmaheedii ayaa koray, oo eeyo waa weeyn noqday, isagoo wali xaal sidii yahay, qalanjadiina uur leedahay.
Eeyaddii ayaa intay qalanjadii ka yaabtay waydiisay “Ku dhawaad laba sano ayaad uur leedahay. Waqti isku mid ah ayaan ilmaha caloosha ku qaadnay, aniga Carruutaydu way koreen, adiguna wali xaamilo ayaad tahay, oo waxaba maadan dhaline, see wax kaa yihiin?”
Qalanjadii waxay ugu jawaabtay “ Waxa aan sido ma ahan ilmahaaga oo kale, waxaan sido waa maroodi. Hal xabbo ayaan labadii sanaba mar dhalaa; markaas aan dhalana, ilamahayga culayskiisa dhulka ayaa dareema. Marka uu ilmahaygu waddada marayo, dadka ayaa si ashqaraar leh udaawada. Waxa aan sido waa weynaan iyo layaab!”
Waa suura gal in asaaggaa iyo dadkii kula midka ahaaba ay beri hore hana qaadeen, horumar gaareen, guursadeen, hanti tabcadeen, dibadda udhoofeen, xilal qabteen, guulo waaweeyn gaareen, adiguna aad wali halkaagii taagan tahay, hebelkaagii ama heblaayadii ay kugu yaqaanneena aad tahay. Waa suura gal in aad nolosha qawadday, oo wax walba u aragtid in ay adiga lid kugu yihiin. Waa suura gal in isku dayo badan oo aad samaysay aay kaa dhicisoobeen, halka adiga asaagga ay ka guul gaareen.
Farqiga adiga iyo aynigaa idiin dhexeeya waxaad u aragtaa, in uu nasiib iyo calaf yahay, laakiin ma ahan. Farqiga idiin dhexeeya, waa mid lamid ah farqiga udhaxeeya labadii nafle ee aan hadda ka soo sheekaynay. Muhiimaddu ma ahan in aad heshid guul iyo natiijo farxad leh oo dag dag ah. Muhiimaddu waa in aad gacanta ku haysid, shaqo ama riyo aad doonaysid in ay maalin un kuu rumowdo. Marka ay jirto riyo iyo hadaf aad garistiisa utooga haysid, waa astaanta koowad ee lagu garto guusha iyo sacaadada.
Haddiiba ay jirto rajo iyo hadaf aad dhisaysid ka guul gaariddiisaana aad ku hawlan tahay, xooji iimaankaaga iyo kalsoonida aad rabitaankaaga ku qabtid. Guulaha iyo natiijooyinka ay asaaggaa helayaanna yaysan ku niyad jabin.
Waxa aad ku taamaysid ka shaqaysii, udul qaado, dadaal badan gali, mar walbana cusbaynsii niyad samid in dhiirranaantaad ku aaddan waxaas aad ku taamysid gaaristiisa. Ogoow waxa soo daaha, in uu kun jeer ka wacan yahay waxa soo dag daga. Nafsaddaada mar walba waxaad ku dhiirri galisaa “Waqtigaygu wuu imaan doonaa. Marka uu yimaadana, adduunkoo dhan bay riyadaydu ifin doontaa, dadkoo dhanna markaas ayay riyaaq iyo jacayl iigu sacabba tumi doonaan!”
Haddii aad wax-akhriska aqoonta iyo xikmadda jeceshahay, fadlan ku biir Page- ka facebook ee Mohamed H. Fariid